लुइस स्वारेज	फरवार्ड
एजेन्स । लुइस स्वारेजले आफुलाई उच्चकोटीका खेलाडीकै दर्जामा उभ्याएका छन् । बार्सिलोना क्लबबाट ब्यवसायिक फुटबल खेल्दै आएका स्वारेजले आफ्नो देश उरुग्वेलाई विश्वकपसम्म पु¥याउन ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।
सन् २०१० देखि विश्वकपमा उरुग्वेबाट खेल्न थालेका स्टाइकर स्वारेजले आफ्नो पहिलो विश्वकपमा नै दमदार उपस्थिति जनाएका थिए । समूह चरणको अन्तिम खेलमा मेक्सिको विरुद्ध स्वारेजकै निर्णायक गोलको कारण उरुग्वे अन्तिम–१६ मा पुगेको थियो ।
प्रि–क्वाटरफाइनलमा दक्षिण कोरिया विरुद्ध उरुग्वेले २–१ गोलअन्तरले जित्दा यस खेलमा पनि स्वारेज नायक बनेका थिए । स्वारेजले खेलको आठौं र ८० औं मिनेटमा गोल गर्दै उरुग्वेलाई क्वाटरफाइनलमा पु¥याएका थिए ।
क्वाटरफइनलमा घानामाथि पेनाल्टी सुटआउटमा ४–२ ले विजयी हुदै उरुग्वे सेमिफाइनलमा पुगेको थियो । तर उरुग्वेले यो विश्वकपमा चौथो स्थान हासिल गरेको थियो ।
सन् २०१० को विश्वकपमा ३ गोल गरेका स्वारेजले सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । यद्यपी विवादमा पर्दै लामोसमय प्रतिबन्धमा पनि परेका थिए ।
यो विश्वकपको समूह डी बाट उरुग्वे उपजिवेता बन्दा समूह चरणमा स्वारेजले २ गोल गरेका थिए । इंग्ल्याण्ड विरुद्धको खेलमा उरुग्वेले २–१ गोलअन्तरले जित्दा ती दुबै गोल स्वारेजको थियो । स्वारेजले खेलको ३९ औं र ८५औं मिनेटमा गोल गर्दै नायक सावित भएका थिए ।
तर यसै विश्वकपमा स्वारेज सबैभन्दा बढि बदनामको सिकार पनि बने । समूह चरणको अन्तिम खेल स्वारेजका लागि काली दिन जस्तै बन्यो । यो सबै उनकै गल्तीको कारण भएको थियो । इटाली विरुद्धको खेलमा स्वारेजले इटालीका डिफेन्डर जर्जियो चेलिनीको काँधमा टोकेका थिए । त्यसपछि उनलाई लामो समय फिफाले प्रतिबन्ध गरेको थियो ।
रुस विश्वकप २०१८ मा पनि उरुग्वेको पहिलो रोजाई कै खेलाडी हुन् स्वारेज । अहिलेसम्म विश्वकपमा ५ गोल गरिसकेका स्वारेजको यात्रा यो विश्वकपमा भने कस्तो रहला ? कतै फेरी बदनाम, या चर्चाको शिखर ? त्यो भने केही दिनपछि थाहा हुनेछ ।